မိုက်တဲ့ကောင် နီလိုက်ကွာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » မိုက်တဲ့ကောင် နီလိုက်ကွာ
Posted by တောင်ပေါ်သား on Sep 4, 2013 in Politics, Issues | 18 comments
ပြီးခဲ့တဲအပါတ်က.. ယူအက်စ်မှာ လေဘာဒေးပိတ်ရက်မို့.. ကမ္ဘာကျော်ရော့ကီးတောင်တန်းပေါ်က.. ရိုစမီတီအမျိုးသားသစ်တောကိုသွားလည်ပါတယ်..
တကယ်က.. အဲဒီမှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့သမိုင်းဝင် တောမီးကြီးလောင်နေသမို့.. လူအ၀င်အထွက်တော်တော်နည်းတာပါ…
Los Angeles Times-by Samantha Schaefer-2 hours ago
Rim fire: Pot-growing operation near Yosemite may have sparked blaze · joseph.serna@latimes.com · Twitter: @josephserna · Samantha.
ရိုစမတီသစ်တောက မြစ်ဖျားခံတဲ့..မြစ်ကိုဆည်ဖို့ပိတ်စို့ပြီး.. ရေကာတာဆောက်.. အဲဒီကနေ.. ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ကို.. ရေသန့်နဲ့..လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်..။
အခုတော့.. ဆန်ဖရန်လည်း.. အသည်းအသန်ဖြစ်ပေါ့…
O’Shaughnessy dam with Hetch Hetchy reservoir behind it. The area is threatened by wildfires. The reservoir provides water to 2.6 million people in the San Francisco bay area, the dam’s hydroelectric power plants provide power for some San Francisco municipal buildings. Photo taken June 17, 2011.(Photo: Elizabeth Weise – USA TODAY)
Yosemite Fire Threatens San Francisco Water And Power
Huffington Post-Aug 27, 2013
SAN FRANCISCO–As the massive Rim Fire near Yosemite National Park continues to grow, firefighters are scrambling to getahand on the …
ပုံမှန်အားဖြင့် တနှစ်ကြိုဘွတ်လုပ်ရတဲ့.. ဟိုတယ်ခန်းတွေ.. အကုန်လွတ်နေပါသဗျ…
ကျုပ်လည်း.. သစ်တောနားကပ်ရက်မြို့လေးက.. ဟောတယ်ခန်း တည၁၀၀နဲ့ပေါချောင်ကောင်းရပါတယ်..
အဲဒီကနေ.. သစ်တောဝင်းထဲရောက်တော့… အံ့သြစရာတွေရပါတယ်..
လွန်ခဲ့တဲ့… ၃နှစ်ကရောက်တုံးက..စိမ်းစိုနေတဲ့သစ်တော… ရေတံခွန်တွေနဲ့ စွတ်စိုနေတဲ့သစ်တော…
ရေတံခွန်မှာ ရေမရှိ… စမ်းချောင်းငယ်လေးတွေ.. ရေခြောက်ခမ်းနဲ့… ၃နှစ်အတွင်းပြောင်းသွားပုံ.. လန့်စရာပါ…။
ရေတံခွန်စမ်းချောင်းငယ်တွေဟာ.. မြစ်ကြီးတွေရဲ့.. မူလရေရရာအရင်းအမြစ်တွေပါ..
အဲဒီစမ်းချောင်းငယ်လေးတွေရေဘယ်ကရသလည်းဆိုတော့.. တောင်အမြင့်တွေပေါ်က.. နှင်းခဲတွေမိုးတွင်းဆောင်းတွင်း.. ကျထားတာတွေရေည်ဖြေးဖြေးချင်းပျော်နေတာကနေ.. ရတာပါတဲ့…
ကမ္ဘာပူနွေးလာလို့.. ဆီးနှင်းတွေအရေပျော်ကျကုန်တာမြန်… မြန်တော့.. အခုလိုနွေခေါင်ခေါင်မှာ.. ပျော်ကျစရာဆီးနှင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့…
ဂရင်းလန်းဒ်လို့ခေါ်တဲ့.. ဆီနှင်းတွေနဲ့ဖုံးထားတဲ့.. ကျွန်းကြီး.. အာတိတ်ရေခဲပြင်ကြီး. အားလုံးခံစားနေရပါတယ်..။
Greenland Ice Is Melting — Even from Below: Heat Flow from the …
Science Daily (press release)-Aug 13, 2013
Aug. 11, 2013 — The Greenland ice sheet is melting from below, caused byahigh heat flow from the mantle into the lithosphere. This influence is very variable …
ဧရာဝတီရဲ့..မူလ.. မေခ..မလိခ.. မေခမလိခရဲ့ရေရာ.. ဟိမ၀န္တာတောင်ကြောလည်းခံစားနေရပါတယ်…
Mt. Everest Melting Due To Climate Change: Snow, Glaciers Retreat …
KpopStarz-Aug 23, 2013
Mount Everest’s frozen peak has melted by 13 per cent in the last 50 years. The snow line has retreated rapidly, by 590 feet, causing rocks and …
ဧရာဝတီကို.. သေသေချာချာလေ့လာပြီး.. တကယ်(တကယ်)ကယ်သင့်တဲ့အချိန်ပါလို့..
ဧရာဝတီရဲ့..ရေချိုတွေ ပင်လယ်ထဲအလဟဿမစီးဆင်း.. မကုန်ဆုံးစေပဲ.. စနစ်တကျသုံးစွဲရမယ့်အချိန်ပါလို့…
Salon-Aug 4, 2013
As we have been hearing, global water shortages are poised to … the number of people unable to reach or afford safe drinking water by 2015, ..
EurActiv-14 hours ago
The report coincides with World Water Week,ayearly event by the … from increased global demand, and shortages and floods caused by climate change. … valuable wetland habitats, protection of drinking water resources, …
တဂျီးပြောတာကို လည်း နားလည်ပါတယ်။
ဒါမဲ့ ကျနော့ အမြင် (ကျနော့ တစ်ယောက်တည်း အမြင်) အရ။
ဒီ ဧရာဝတီကို မထိချင်ဘူးဆိုတာ ကွန် အမြင်နဲ့ နောက်ပြန်ဆွဲနေတာမဟုတ်ပဲ
ဒီ အစိုးရ နဲ့ တရုတ်လက်ထဲ ဘရုတ်သုတ်ခဖြစ်မှာပဲ မလိုလားတာပါ။
သူ့တို့ ပေါင်းတဲ့ ဘယ် ပရော့ဂျက်ဟာ မြန်မာပြည်ကြီး အတွက် ကောင်းခဲ့ပါသလဲ လို့သာ။
တာဆီးတဲ့ သူများလည်း ဒီလိုပဲရှိမယ်မှတ်ပါတယ်။
အဲသည့် မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်လိုက်ရင် အားလုံးပြီးပြည့်စုံသွားမှာလား????
နောက်ပြီး ဘယ်သူ့ အကျိုးစီးပွါးအတွက် ဆောက်မှာလဲ????
Global Warming က ဆည်တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကရော????
ရေလီတာ ၅၀ကို တချိန်လုံးမထားရရင် ကိုယ်တွေလက်တွေ ဘယ်လိုနေမလဲ????
အခု ရေလီတာ သန်းပေါင်းများစွာကို ငလျင်ကြောပေါ် တင်ထားရရင်ရော????
မြစ်အကြေအရပ်မှာ ရေငံဝင်လို့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ပျက်မည့်ကိစ္စကို…
(မယုံမရှိနဲ့ ဆည်ရေထိန်းချိန်မှာ ရေငံပေါက်ရင် အားလုံးထမင်းငတ်သွားမယ်)
ကျောက်စ် အဲဒါနဲ့ပက်သက်လို့ ဖတ်ထားတဲ့ စာတမ်းရှိတယ် ရှည်နေလို့….
နောင်များမှ မြန်မာမှုပြု အတိုခြုံးပြီးတင်ပေးမယ်…
မြန်မာပြည်မြစ်ကြီးနားဝန်းကျင်လောက်က ငလျှင်ကြောလောက်တော့.. သနားတယ်ခေါ်ရလောက်အောင်.. လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေပါတယ်..။
အဲဒါကနောက်… လောလောဆယ်… ယူအက်စ်က မြစ်ကြီးတွေအားလုံး(အားလုံး) ဆည်ဆောက်.. လျှပ်စစ်ထုတ်နေပြီးနေပြီ..။
ယူအက်စ်မြစ်တစင်းမှာ.. ဆည်တခုတောင်မဟုတ်.. ၁၀ဂဏန်းတောင်…
The exact number of dams is not known. There are approximately 79,000 dams in the US Army Corps of Engineers’ (Corps) National Inventory of Dams (NID), which is the most comprehensive inventory of dams nationwide. However, this inventory only covers dams that meet minimum height and impoundment requirements, so an unknown number of small dams are not included in the inventory. Of the 79,000 dams in the database, approximately 66,000 are located on rivers (the remainder impound water off-river).
– See more at: http://www.americanrivers.org/initiatives/dams/faqs/#sthash.MfdF7ovZ.dpuf
မြစ်ဆုံမှာ ဆည်ဆောက်ရမယ်တော့ မဟုတ်..
ဧရာဝတီမှာ.. နေရာအနှံ့ ဆည်တွေဆောက်ကြရမယ်.. ရေချိုကိုဆည်ပိတ်ရမယ်.. လျှပ်စစ်ဓါတ်ထုတ်ကြရမယ်လို့.. .ဆိုလိုရင်းပါ…။
မိုးတွင်းမှာ.. ရေတွေဆည်ပိတ်ဆို့ပြီး.. ရေကြီးတာကို ကာကွယ်မယ်..
နွေမှာ ရေလွှတ်ချပြီး.. ရေနည်းတာကို ဖြည့်မယ်…။
သဘာဝကိုသဘာဝအတိုင်းမထားပဲ.. လူ့စွမ်းအားနဲ့.. သဘာဝကိုထိမ်းချုပ်မယ်..။
ဒီလိုလုပ်ဖို့..( စိနပြည်မှမဟုတ်..) ကိုယ်တွက်ချေကိုက်မယ်ဆိုရင်.. အကုန်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်မယ်..။
အရင်က.. စိနပြည်တခုထဲမို့.. ရင်းနှီးမြုတ်နှံမယ့်ပြည်ရှာဖို့.. ခက်ကောင်းခက်နိုင်ပေမယ့်… အခုအချိန်ကျ.. အီတလီခေါ်မလား.. ဂျပန်ခေါ်မလား.. ယူအက်စ်ခေါ်မလား.. အေးဆေးပဲ… ဆိုတဲ့အခြေအနေလေ…
သူတို့ကလျှပ်စစ်မီးလည်း အလုံအလောက်ရပြီး.. အဲယားကွန်းလေးနဲ့..စာပွဲပေါ်ထိုင်နှပ်နေနိုင်သူတွေကိုးဗျ…
ပြောရရင်.. ယူအက်စ်အပါအ၀င် ဥရောပနိုင်ငံတွေက.. ကမ္ဘာကုန်ကယ်မည်ဆိုသူလူကြီးမင်းများကို.. အားကြီးအမြင်ကပ်တယ်..
သူတို့ကျ ကမ္ဘာကိုလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ခဲ့ပြီး.. ငမွဲနိုင်ငံကလေးတွေ.. စက်မှုလုပ်ဖို့.. အားလည်းယူရော.. ဂလိုဘယ်ဝမ်းမင်းဆိုပြီး..၀င်အော်လိုက်ကြတာ..
သူတို့အစိုးရတွေကျ… ကမ္ဘာဒုက္ခရောက်အောင် လက်တွေလုပ်နေတာတွေ..လျှေ့ာလည်းမလျှော့.. လုပ်ပြီးတာတွေအတွက်လည်း.. တာဝန်မယူ..
ဧရာဝတီနဲ့.. မြန်မာပြည်ကို.. တကယ်(တကယ်) ကယ်တင်ပါ…
ကျနော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာတမ်းထဲမှာ အဲဒါတွေလည်း ပါ ပါတယ်။ San Andreas Fault ဆိုရင် အခုအထိ ရွေ့နေလို့ Satellite က တိုင်းရတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ။
စာမြည်းပေးမယ်လေ သဂျီးရဲ့… ရေဖြည့်လိုက်တိုင်း ငလျင်လှုပ်လို့ Spillway ဖွင့်ထားရတဲ့ ဆည်တွေ။ Catchment Area ကတောင်ပြိုကျလို့ ဆည်လည်းဆုံး အိပ်နေတုန်း လူ ၂၀၀၀လောက် ရေအောက်ရောက်သွားတာတွေ။ ပါကစ္စတန်မှာ ရေချိုအသိမ်းလွန်လို့ မြေလွှာအောက်က Salt Dome တွေ အရည်ပျော် မြေပေါ်ကို ရောက်လာလို့ လယ်တွေ ပျက်ရတာတွေ။ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ် အကုန်ပါတာမို့ စဉ်းစားစေချင်လို့ပါ။ တကယ်တော့ စစ်ကိုင်းငလျင်ကြော ကလည်း San Andreas Fault နဲ့ နင်လားငါလားမို့ မုံရွာနား မြစ်ကြမ်းပြင်အောက်က ရေချိုကန် (Underground Freshwater Basin) ကွဲသွားရင် အကုန်လုံး အကျိုးနဲမှာခင်ဗျ။ ပိုက်ဆံရှိရင် နည်းပညာက သဘာဝကို အံတုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Investor တွေ၊ Developer တွေ၊ Contractor တွေ၊ ထွင်တဲ့ စကား… ဘယ်လောက်မှန်သလဲ လို့ စဉ်းစားကြတာပေါ့။ ကျောက်စ်လည်း Contractor ပါ၊ ဒါပေသည့် Sustainable Development ကို ထိန်းရမှာ လူသားအားလုံးနဲ့ ဆိုင်တာမို့….
ကျောက်စ် 1-0 မားခိုမ်
ကျုပ်က တင်လိုက်ရတာ.. သတင်းတွေ..ပုံတွေနဲ့.. ဖတ်ဖတ်မော ရင်ဘတ်နောက်ကကျော..
ကျောက်စ်က.. စာတမ်းစာတမ်းနဲ့.. ဘာမှန်းမသိတာနဲ့ကိုင်ကိုင်ပေါက်နေတော့ကာ..
အကျယ်သိချင်ရင် အောက်ပါလင့်မှာလည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်…
ဒါပေမယ့်.. ထိုင်းကဦးဆောင်ရေးတာမို့.. သံသယအပြည့်နဲ့ဖတ်မယ်လို့ ကြိုပြောပါရစေ..။ လောလောဆယ်.. ဘရိန်းစရုံးလုပ်ဦးမယ်..။ ဒီလို…
Dams and reservoirs in China are numerous and have hadaprofound effect on the country’s development and people. According to the World Commission on Dams in 2000, there were 22,104 dams over the height of 15 m (49 ft) operating in China. Of the world’s total large dams, China accounts for the most – 20 percent of them; 45 percent of which are used for irrigation. Accordingly, the oldest in China still in use belongs to the Dujiangyan Irrigation System which dates back to 256 BC. In 2005, there were over 80,000 reservoirs in the country and over 4,800 dams completed or under construction that stands at or exceed 30 m (98 ft) in height.
India ranks third in the world after China, USA and Russia in terms of number of dams. The country has about 4710 completed large dams.
ပြောချင်တာက.. သူတို့တွေ ထောင်သောင်းချီတဲ့.. ရေကာတာတွေဆောက်ပြီးမှ… ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ကြတယ်..။
အခု.. မြန်မာပြည်ရဲ့ တခု၂ခုလောက်လုပ်ပါမယ်ဆိုမှ.. လာစာရင်းမရှုပ်စေလိုပါ… လို့…
1) BuildaDam
2) Inject Liquid Into the Ground:
3) MineaLot of Coal:
4) DrillaGusher Dry
5) Create the World’s Biggest Building:
တခုလိုချင် တခုပေးရမှာပေါ့… ဟုတ်ဘူးလား…
ရေချိုရင်းမြစ် ဘာဖြစ်သလေး ညာဖြစ်သလေးနဲ့ ဒီသဂျီးကတော့ ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီးကို မျက်စောင်းထိုးပြန်ဘီ…
အဲ့လာယီးက နတ်နေကိုင်းဗျ …လော့ဂျစ်ဘယ်လောက် ဟုတ်ဟုတ် ပရော်ပါဘစ်လတီနဲ့ ဇကာတိုက်ချလိုက်ရင်
ဂွမ်း မယ့် အိုင်ဒီယာပါအူးလေးရာ…
.. မြန်မာပြည်ရဲ့ရာဇ၀င်များရဲ့သတို့သမီး.. ရေငတ်… အပျိုရည်ပျက်ရင်.. သမိုင်းတရားခံမဖြစ်အောင်..
ရေအားလျှပ်စစ်က သဘာဝရာသီဥတုကိုမှီနေရအုံးမယ် ကျောက်မီးသွေးတို့ နယူကလီယားတို့ကနေ ထုတ်နိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်ထင်တာပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်ဆောက် ထားတယ် အဲဒါဆောက်တုန်းကတော့ ဒီစီမံကိန်းကြီးပြီးသွားရင် မန္တလေးကတော့ လျှပ်စစ်မီးပူစရာ မလိုတော့ဘူး မက်ကာဝပ်ကအများကြီးရမှာတဲ့။ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာတော့ မနှစ်ကမိုးကောင်းကောင်းမရွာလို့ ရဲရွာလည်းမကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာ မီးစက်ကလေးတွေအသံ ဆူဆူညံနဲ့ အရင်လိုပါဘဲဖြတ်သန်းခဲ့ရပါ၏။
နှူက.. မြန်မာတွေရဲ့နည်းပညာငွေအင်အားနဲ့.. မနိုင်သေးပါဘူး..
နှူယိုထွက်လာရင်.. ပရုပ်ဆီလူးလို့.. မပျောက်ဖူးဗျ…
ကမ္ဘာ့စီးပွားအင်အား တတိယအကောင်းဆုံး.. အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာမြင့်ကိုင်ထားတဲ့.. ဂျပန်တောင်.. ပြာယာကိုခတ်နေရသာတာ ကြည့်ပေတော့..။
Japan’s government is to spend almost $500m (£320m) in an attempt to contain leaks and decontaminate highly toxic water at the Fukushima …
ဟောင်ကောင်မှာ လျှပ်စစ်ကို တောင်အာဖရိက ကနေ ကျောက်မီးသွေး တင်သွင်းပြီး ထုတ်ပါတယ်။ အနားက ကျွန်းတကျွန်းပေါ်မှာ တာဘိုင်ထိုင်ပြီးထုတ်တာခင်ဗျ။ ဟဲ ဟဲ… Black Rain ရွာတော့လည်း သူလိုငါလိုဆိုတော့၊ အစိုးရက အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သတင်းထုတ်ပြန်ပေး၊ Alert Level ရောက်လာရင် အိမ်ပြင် မထွက်ကြဘူးလေ။ တခုလိုချင် တခုပေးရမှာပေါ့… ဟုတ်ဘူးလား… ဒါတော့ သဘောတူတယ်…
သိမ်းကြုံး ဖတ်ရှု သွားပါကြောင်းးးး
ကျောက်စ် 1-0 မားခိုမ် ကို
+ ပေးမလို့ မရတာနဲ့ ၀င်မန့်လိုက်တာ။
( ၁၀ အချောင် ၀င်ယူခြင်း မဟုတ်)
ခုရက်ထဲ ဒီက ကွန်ကြောင့်ပဲလား ဘာကြောင့်လားတော့ မသိဘူး။
၀င်ရခက်တာအပြင် + ပေးလို့လည်း မရဘူး။
ဒီကြားထဲမှာ တချို့ပိုစ့်တွေမှာ အနီတွေ များနေတာ အံ့တောင် အံ့သြမိတယ်။
Sep6/ 3:10 pm